လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှု - ဝီကီပီးဒီးယား
လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှု (အင်္ဂလိပ်: grid illusion) သည် ဂရစ်ဒ်ဟုခေါ်သော လေးထောင့်ကွက်များမှ လူ၏အမြင်အာရုံကို လှည့်စားခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးများဆုံး ပုံစံနှစ်ခုမှာ ဟားမန်း လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှု (Hermann grid illusion) နှင့် တလက်လက်တောက် လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှု (scintillating grid illusion) တို့ဖြစ်ကြသည်။
၁ ဟားမန်း လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှု
၂ တလက်လက်တောက် လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှု
ဟားမန်း လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
ဟားမန်း လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှုသည် Ludimar Hermann က ၁၈၇၀ တွင်ထုတ်ဖော်တင်ပြခဲ့သော အမြင်ဆိုင်ရာ လှည့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လှည့်စားမှုမှာ အနက်ရောင်နောက်ခံတွင် အဖြူရောင် (အလင်းသွင်းထားသည့် အရောင်) လေးထောင့်ကွက် စုံမှတ်များကို ကြည့်လျှင် ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် မီးခိုးရောင်အကွက်ကလေးများကို တွေ့မည်ရသည့် ပုံစံရှိသည်။ စုံမှတ်တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုပါက ထိုမီးခိုးရောင်အကွက်လေးများ ပျောက်သွားသည်။
တလက်လက်တောက် လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
တလက်လက်တောက် လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှုသည် E. and B. Lingelbach နှင့် M. Schrauf တို့က ၁၉၉၄ တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိသော အမြင်ဆိုင်ရာ လှည့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟားမန်း လေးထောင့်ကွက် လှည့်စားမှု၏ မူကွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် မတူညီသည့် ဂုဏ်သတ္တိများရှိ၏ ။
အနက်နောက်ခံတွင် ထောင့်မှန်ကျဖြတ်လျှက်ရှိသော မီးခိုးရောင်မျဉ်းများ၏ ဆုံမှတ်ပေါ်၌ အဖြူရောင် အချပ်ပြားဝိုင်းများ ထပ်နေစေခြင်းဖြင့် ဤစနစ်ကို တည်ဆောက်ထားသည်။ ကြုံရာကျပန်း မျဉ်းဖြတ်ဆုံမှတ်များ၌ အနက်ရောင် အစက်များ ပေါ်လိုက် ရုတ်တရက်ပျောက်သွားလိုက် ဖြစ်နေတတ်သည့် လှည့်စားမှုသဘောကြောင့် 'တလက်လက်တောက်' ဟူ၍ ကင်ပွန်းတပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏မျက်လုံးအစုံကို ဆုံမှတ်တစ်နေရာတည်းသို့ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုသောအခါ အနက်စက်များ ပေါ်မလာတော့ပေ။ အကယ်၍ ဤပုံမှ အလွန်အမင်းနီးကပ်စွာသော်လည်းကောင်း အလွန်တရာဝေးသည့်နေရာမှ ကြည့်လျှင်သော်လည်း အနက်စက်များ ပျောက်သွားသည်။
အထက်ပါ နှစ်ခု၏ ကွာခြားချက်မှာ 'တလက်လက်တောက် လှည့်စားမှု' ၌ ဆုံမှတ်များတွင် ယခင်ကတည်းက အစက်များရှိနေပြီးဖြစ်၍ 'ဟားမန်း လှည့်စားမှု' တွင် ဆုံမှတ်များ၌ အစက်များ အစကတည်းက မရှိပေ။ တူညီမှုရှိသောကြောင့် ဤနှစ်ခု၏ အမည်ကို အပြန်အလှန်သုံးစွဲကြသည်။ 'တလက်လက်တောက် လှည့်စားမှု' နှင့် 'ဟားမန်း လှည့်စားမှု' နှစ်ခုလုံး၌ ထီးတည်းတည်ရှိသော ဆုံမှတ်တစ်ခုဖြင့် အာရုံလှည့်စားမှုဖြစ်ပေါ်မလာပေ။ လေ့လာမှုများက အကြံပြုသည်မှာ တလက်လက်တောက် လှည့်စားမှုရစေရန် အနည်းဆုံး ၃ × ၃ ပမာဏဖြင့် ဆုံမှတ်များကို နေရာထားရမည်ဖြစ်ကာ အပေါ်မှ အဖြူချပ်များတင်ထားပေးရမည်။
နှစ်ခုစလုံး၏ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်စားမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အာရုံကြော လုပ်ငန်းစဉ် lateral inhibition က များသောအားဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ အမြင်စနစ်တစ်ခုတွင် နေရာ (point) တစ်ခု၌ စူးစိုက်မှုသည် အာရုံခံတစ်ခုဖြစ်သော receptorတစ်ခု၏ ရလဒ်မဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် receptor များစွာ (အုပ်စု) က receptive field ဟုခေါ်သော အာရုံခံရာအပိုင်းမှ လှုံ့ဆော်မှုများကို တုံ့ပြန်သဖြင့် ဤရလဒ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာသည်။
↑ Hermann L (1870). "Eine Erscheinung simultanen Contrastes.". Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie 3: 13–15. doi:10.1007/BF01855743.
↑ ၂.၀ ၂.၁ "The Hermann Grid and the scintillation effect" (1995). Perception 24 Suppl. A: 88–89.
↑ "The Scintillating Grid Illusion" (1997). Vision Research 37 (8): 1033–1038. doi:10.1016/S0042-6989(96)00255-6. PMID 9196721.
↑ Baumgartner G (1960). "Indirekte Größenbestimmung der rezeptiven Felder der Retina beim Menschen mittels der Hermannschen Gittertäuschung.". Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie 272: 21–22. doi:10.1007/BF00680926.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လေးထောင့်ကွက်_လှည့်စားမှု&oldid=630351" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။